ဗိုလ်ထက်မင်း – ရခိုင်၊ ဘင်္ဂလီအရေးနဲ့ လက်မဲကြီးများ (၁) | MoeMaKa Burmese News & Media
၆။ နောက်ကွယ်လက်မဲကြီးတွေက တခုသာ မဟုတ်ဘဲ စာရေးသူ Focus လုပ်ကြည့်တာကတော့ လက်မဲ (၃) လက် တွေ့ရပါတယ်။ ပထမလက်မဲကတော့ နိုင်ငံတကာမှာ သူတိုကိုယ်သူတို့ ရိုလင်ဂျာလို့ခေါ်တဲ့ ဘင်္ဂလီအဖွဲ့အစည်း – အာရကန် ရိုလင်ဂျာသမဂ္ဂ (Arakan Rohingya Union) ဖြစ်ပြီး ဒုတိယလက်မဲက ဆော်ဒီအာရေဗျနောက်ခံဖြစ်ကာ နောက်ဆုံးလက်မဲကတော့ ဗြိတိန်၊ ဘင်္ဂလားဒေရ်ှနဲ့ အပေါင်းအပါ မလေးရှားနဲ့ တူရကီ နောက်ခံတွေတို့ဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဂျွန်ကယ်ရီ၊ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီးဟောင်း ဒဲရစ်မစ်ချယ်၊ လူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ် ယန်ဟေးလီ တို့ကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ တူရကီ သမ္မတနဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်တို့ကို အကြိမ်ကြိမ် တွေ့ဆုံခဲ့သလို မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံ ဘင်္ဂလီ ကျောင်းသို့ သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကတည်းက OIC အစည်းအဝေးကျင်းပရာ ဆော်ဒီနိုင်ငံ JEDDAH မှာ ဘင်္ဂလီများ အရေးတင်ပြကာ ARUကို စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ သူဟာအဖွဲ့ရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ကာ အင်မတန်မှ သိုသိုသိပ်သိပ် လျှို့ဝှက်လွန်းတာမို့ အဖွဲ့ဝင်တွေ ဘယ်သူဆိုတာ မသိရသေးဘဲ သူတို့ရဲ့ ဌာနချုပ်ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံ ဝါရှင်တန်နဲ့နီးတဲ့ မြို့တမြို့ဖြစ်မည်လို့ ခန့်မှန်းရကာ သူတို့အဖွဲ့ လှုပ်ရှားမှုအတွက် ရှေ့နေငှားရမ်းထားတယ်လို့ သိရပြီး ရှေ့နေကတော့ Robert C. Rayman, Attorney at Law, 1315 W College Avenue, Suite 300 State College, PA 16801. Arakan Rohingya Union (ARU) ဖြစ်ပါတယ်။ (Ref- http://www.arucongress.com/bu/ )
၁၀။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၅ရက်နေ့မှာ ဆော်ဒီအာရေးဗျနိုင်ငံက ဗိုလ်ချုပ်(ငြိမ်း) ဒေါက်တာ အန်နဝါ အဆာကီ (ဥက္ကဌ ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း မဟာဗျူဟာလေ့လာရေးဗဟိုဌာန) က ဒေါက်တာဝါကာအူဒင်ကို ဘင်္ဂလီကိစ္စအား နိုင်ငံတကာစင်မြင့်ရောက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မှုနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေရ်ှနိုင်ငံကို လိုအပ်တဲ့ ထောက်ပံ့မှုတွေ ရအောင် ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်လို့ Middle East Center က ရဲ့ Expression of Gratitute ကိုပေးခဲ့ပါတယ်။ (Saudi Maj. Gen. (Ret.) Dr. Anwar Eshki, Chairman of the Middle East Center for Strategic and Legal Studies (MECSLS), heldareception for the Director General of Arakan Rohingya Union, Dr. Wakar Uddin, at the MECSLS Headquarters in Jeddah, Saudi Arabia) ဒါဆိုရင်​ သူ့ရဲ့လက်​တံ ဘယ်​လောက်​ရှည်​တယ်​ဆိုတာ မှန်းဆနိုင်​ပါတယ်။ (Ref – https://www.facebook.com/Prof.WakarUddin/ )
( (ARSA အဖွဲ့အနေဖြင့် ယနေ့အချိန်အထိ ထွက်ပြေးခြင်းမရှိသည့် မောင်တောဒေသမှ ရွှေဇာ ကျေးရွာအုပ်စု၊ မော်နီရွာ၊ ကပ္ပကောင်းကျေးရွာ၊ ဂုံနားကျေးရွာအပါအဝင် ဘင်္ဂါလီကျေးရွာတိုင်းကို ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်၍ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်သို့ အမြန်ဆုံးထွက်ပြေးကြရန်ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုခဲ့) (အလားတူဘူးသီး​တောင်​မြို့နယ်​၊ ​ညောင်​​ချောင်းရွာအနီး၊ ဘုရားပြင်​​အောင်​ပ​ကျေးအုပ်​စုအောင်​ပ​ကျေးရွာ၌ ​နေထိုင်​သူ ဘင်္ဂလီအမျိုးသမီး ဆိုးဘုံဒါဟာ ဘင်္ဂလာ​သို့ ထွက်​​ပြေးရန်​ ကြံစည်​ပြီးအိမ်​အနီး​ နေသူ အခြားဘင်္ဂလီမုဆိုးမတ​ယောက်​အား တတူလိုက်​ရန်​ ခေါ်သည်​ကိုမလိုက်​သဖြင့်​၊ ၄င်းမုဆိုးမအိမ်​ အား မီးရှိုးခဲ့သည်​ဟု မီးရှို့ခံရသူ ဘင်္ဂလီမုဆိုးမက ​ပြောတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေ)
ARSA အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဟာ ဟိန္ဒူလူမျိုးတွေကို သတ်ဖြတ်ကာ မြေမြှုပ်ထားခဲ့ပြီး နောက်ထပ် လအနည်းငယ်အကြာမှာ ပြန်လည်တူးဖော်လို့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတွေကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်နေသည့်ပုံမျိုးကို ဖန်တီးရန် မဟာဗျူဟာကျကျ ထောင်ချောက်ဆင်ထားတာတွေ၊ ၁၉၉၂/၁၉၉၃ ခုနှစ် မူအတိုင်း မစီစစ်ဘဲ သူတို့ပြောတဲ့ အရေအတွက်အတိုင်း ချက်ခြင်း လက်ခံခိုင်းတာ၊ သူတို့ (ဖုံး/လိမ်) ထားတာပေါ်မှာစိုးလို့ဘင်္ဂလားဒေရ်ှစခန်းတွေမှာ ဒုက္ခသည်တွေကို ဖုံးသုံးခွင့် ပိတ်တာ။
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:ဗိုလ်ထက်မင်း, သတင်းဆောင်းပါး, နိုင်ငံတကာရေးရာ